မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ကိုယ်ပိုင် MILITARY GRADE LIGHT VEHICLE ရှိသင့်လား? (INLAY JEEP) – New Of Burmese
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ကိုယ်ပိုင် MILITARY GRADE LIGHT VEHICLE ရှိသင့်လား? (INLAY JEEP)
အရင်ဆုံး ကျတော့်ကိုလော်ဘီထင်မှာဆိုးလို့ ဘာကောင်မှမဟုတ်သလို ဘာမှလဲမသိပါReview ဆိုတာထက်ကျတော်ခံစားမိတာ ပြင်စေချင်တာလေးတွေပါ ဒီထက်ပိုကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒဘဲရှိပါတယ် ကားတွေကိုကျတော်ချစ်တဲ့စိတ်ဘဲရှိပါတယအရင်ဆုံး မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်သံသယဖြစ်စရာကိုမလိုဘူး ဒီကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Quality ကတော့ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာဒီကားထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် အရင်က TATA Xenon Military တွေဝယ်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေ အများကြီးသက်သာတယ် ထုတ်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးတွေ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်တွေအတွက် လောလောဆယ် ထုတ်ပေးထားတယ်တော့ပြောတယ်ဗျကျတော်ကားကို့မြင်မြင်ချင်း လန့်တောင်လန့်တယ်အဟန့်လဲကြီးသလို G Wagon military လိုပုံပါ
Copy ယူတယ်လိုမပြောချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ပိုင် Design ထက်ဒီလို Reference ယူတာဘလးကပိုအဆင်ပြေတယ် မြင်ပါတယ်အတွင်းခန်းကတော့ဘာမှမပါဘူး ဒေါင်လိုက် dashboard ကြီးရယ် radio ရယ်ဘဲပါတယ်ပျက်စရာမထည့်ထားဘူးလေ စစ်သုံးလေ လိုကိုမလိုတာဟုတ်တယ်မလားပထမဆုံးအားနည်းချက်က ဆေးသားတစ်ထပ်ဘဲပါတယ်ဗျာတောတို့ရမယ့်ကားက တစ်ထပ်ထဲဆို နောက်ဆိုသံအခွံကြီးဘဲကျန်သွားမှာ အဲ့တာလေးလုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းသွားမှာပါOff Road ချရမယ့်ကားဆိူတော့ အရေးကြီးတာ Suspension ​ရှေ့က Double Wish Bone နောက်က Leaf Spring ပြီးပြီလေ ဒီ Setup ကတကယ်အကြမ်းသုံးမယ့် offroader တွေ military grade သုံးတဲ့ ကားတွေမှာလဲ ဒီ Setup ဘဲသုံးတယ်
ရှေ့နောက် Leaf Spring မထိုင်တာတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Offroad capability ကအရမ်းအဆိုးကြီးဆိုရင်တော့မသိဘူးဗျကျတော်လဲမစမ်းရသေးဘူး သာမန်ကတော့အေးဆေးဖြုတ်လို့ရတယ် တာယာကြီးကလဲကြီးတော့ သာမန်ချိုင့်တွေဆို ဖြတ်နင်းသွားရုံဘဲ အဲ့တာမိုက်ပါတယ် Diff Lock တို့ဘာတို့တော့မပါဘူး☹️ 4H 4L တို့တော့ပါတယ်Engine – အစိုးရိမ်ဆူံးအပိုင်းပါဘဲဗျာ 2.8 turbo diesel ကြီးပါဗျာပါ 98 Hp 225Nm ထွက်တယ် နည်းဆို engine ကလဲအဟောင်းကြီး Grand Tiger မှာသုံးခဲ့တာတဲ့ DongFeng engine ကြီးဗျအဲ့တာတော်တော်စိတ်ပူပါတယ် Grand Tiger တွေဘယ်လိုစုတ်ပြတ်ပြီး လက်ပူတိုက်နေရလဲဆိုတာတော့ သိနေကြတာပါဘဲဗျာ တော်တော်တော့ဂရုစိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ် ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့ကားတွေလိုဖြစ်မှာဘဲ
Driveကျတော်က saloon ဘဲမောင်းနေကျမလို့လားမသိဘူးBody On Frameဒီကောင်ကြီးမောင်းရတာ feels like အားလုံးကိုမိုးကြည့်နေရသလို feeling မိုက်ပါတယ် နောက်ထပ် မှန်အခုံးနည်းပညာ ကျတော်တို့လိုနေပါပြီ ပေါ်တာဒီလောက်ကြာနေပြီကျတော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူး2.8 Turbo Diesel +5Speeds Manual ဆိုတော့ Manual ကြောင့် ကားအထသွက်တယ်ထင်ရပေမယ့် Diesel ကြီးက Respond အရမ်းမကောင်း Turbo က2sec3Sec လောက်မှလိုက်လာတယ်နောက်ပြင်စေချင်တာ ထိုင်ခုံhug ပေးထားတဲ့ side bolsters လဲမရှိသလို ခါးလဲနာတယ်☹️ Steering အရမ်းသေးတယ် Respond ကတော့ ကားနဲ့တောင်မလိုက်မြန်တယ်
ဒီလိုကားဒီလောက်မြန်လို့အကြောင်းမသိရင် တုန်းလုံးလဲနိုင်ပါတယ် oversteer ဖြစ်ပြီး ပိုကွေ့နိုင်လို့ပါ Hydraulic Sterring ကြောင့် ရှေ့ဘီးနှစ်ဘီးဘာလုပ်နေလဲသိရတာလဲကောင်းတယ် နောက် မြန်လာရင် Too Scary ပါ ကျတော် 70 KM/hလောက်မှာကိုကြောက်လာတယ်Zig Zag တွေအမြန်မောင်းရင် Body Roll ရှိပေမယ့် စုတ်ပြတ်မနေဘူး ဟိုးအရင် Pajero လူရုပ်တွေထက်မဆိုးဘူးနောက်က Leaf Spring တွေကို Beam နဲ့ခံထားတာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ် ဒါတော့ Impress ဖြစ်ပါတယ် Brake ကတော့ Drum ဘဲ ABS ဘာညာမပါဘူး ကားအရမ်းလေးတာကြီးကို break အုပ်ထည့်လိုက်ရင် တော်တော်ကိုသိသာတယ်
နောက်ကျ Disc လေးပြင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လဲထင်ပါတယ် ABS လေးထည့်ပေးရင်ကောပေါ့ အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ အကြံပေးချင်ရုံပါ Military Grade ဆိုတော့ကျတော်လဲဘာမှဝင်ရှုပ်လို့မရတာနားလည်ပါတယ်ဘယ်လိုနေနေကျတော် ဂုဏ်ယူပါတယ် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေလိုကိုယ်ပိုင် military grade ကားရှိလာတဲ့အတွက်
မူရင်း Review ထားသူ Petrolhead Myanmar အား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
Previous Article ဆီးရီးယားစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံအရဒရုန်းတိုးတက်မှုကိုရုရှားကညှိရန်စီစဉ်
Next Article ကိုဗစ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လိုင်းပေါ်က ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ သောက်လို့ ဘဝကူးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း